साताको ब्लगर: स्मृति शिल्पकार - MeroReport
साताको ब्लगर: स्मृति शिल्पकार
मंगलबजार पाटनमा बस्ने स्मृति शिल्पकार हाल पाटन क्याम्पसबाट समाजशास्त्र मानवाशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । पहिला मुलधारको पत्रकारितामा रहेकी स्मृति अहिले फ्रिल्यान्सरको रुपमा काम गर्छिन ।
स्वतन्त्र रुपले आफ्नो दृस्टिकोण प्रस्तुत गर्न पाइने भएकोले उनी ब्लगिङ गर्न मन पराउँछिन । लेखहरु र फोटोमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने स्मृतिलाई यस पटक साताको ब्लगरको रुपमा छानेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसित मेरोरिपोर्टका लागि दुर्गा लामिछाने र यमुना चापागाईंले गरेको कुराकानीः
मैले ब्लगिङ गर्न थालेको करिब अढाई वर्ष जति भयो ।
कसरी ब्लगिङ थाल्नुभयो ?
मलाई पहिला ब्लगिङको बारेमा थाहा थिएन । मेरो एक जना पत्रकार साथी हुनुहुन्छ उहाँले पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु भएका आफ्नो सबै लेखहरु ब्लगमा पोस्ट गर्नु हुँदोरहेछ । मलाई पनि त्यो लेखको लिन्क पठाउनु हुन्थ्यो मलाई राम्रो लाग्थ्यो ।
मैले केही ब्लगहरु पढेको थिएँ तर मलाई ब्लगको बारेमा केही जानकारी थिएन । एक दुईजना साथीहरुसँग बुझेँ र अरुको ब्लग हेर्न थालेँ । मैले के थाहा पाएँ भने आफूले लेखेका लेखहरु मिडियामा प्रकाशित भइसकेपछि ब्लगमा राख्ने चलन रहेछ । र मैले पनि ब्लग बनाएँ ।
ब्लग नै किन ?
अनलाईन र अरु मिडिया भन्दा पनि ब्लगमा लेख्ने र व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता बढी नै हुन्छ । अरु माध्यममा सम्पादन हुन्छ । तर ब्लगमा आफ्नै दृष्टिकोण व्यक्त गर्न पाइन्छ । आफ्नो मनको कुरा स्वन्त्रतापूर्वक व्यक्त गर्न पाइने भएकोले मैले ब्लगिङ गर्न थालेको हुँ ।
के विषयमा लेख्नुहुन्छ ?
यही विषयमा लेख्छु भन्ने छैन । म जे देख्छु त्यही विषयमा लेख्ने गर्छु । जस्तै म अफिस गइरहेकी छु एउटा होटेलमा बच्चाले भाँडा माझिरहेको देखें र मलाई चित्त बुझेन भने म आफ्नो ब्लगमा लेख्छु । मुल रुपमा आफूले दैनिक देखिरहेको कुराहरुको बारेमा ब्लगिङ गर्ने गर्दछु । मलाई फोटोग्राफीमा पनि एकदमै रुची छ । अहिले सिकिरहेको पनि छु । ब्लगमा फोटोहरु पनि पोस्ट गर्ने गर्दछु ।
ब्लगमा पोस्ट गर्नकै लागि फोटोग्राफी गर्नु हुन्छ ?
कतै जाँदा केही राम्रो लाग्यो भने खिच्छु र पोस्ट गर्छु । ब्लगमा पोस्ट गर्नैको लागि भनेर खिच्दिनँ ।
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नुहुन्छ ?
राम्रो प्रतिकिया पाउने गर्दछु । कहिलेकाहीँ कमजोरीहरु औँल्याइदिनु हुन्छ । अलि भावुक भएर लेख्नु भयो भन्ने जस्ता प्रतिकिया आउने गर्दछन् । धेरै जसो राम्रो छ भन्ने प्रतिकिया पाउने गर्दछु ।
ब्लगिङ गर्दा र मिडिया वा अरु माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा के फरक पाउनु भएको छ ?
फरक त हुन्छ नै । मलाई कसैको ब्लग मन पर्‍यो भने अरुलाई भन्छु र त्यसरी शेयर हुँदै जान्छ । जस्तै ब्लगको माध्यमबाट मैले कसैलाई आफ्नो समस्या भनें भने एकैछिनमा धेरै सुझाव पाउन सक्छु । पत्रकारितामा त आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने ठाँउ नै हुँदैन । ब्लग मलाई अरु माध्यम भन्दा विश्वसनीय पनि लाग्छ ।
ब्लगिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वन्त्रता छ भन्दैमा अरुलाई व्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाउनु हुँदैन । अरुको गोप्य कुरा ब्लगको माध्यमबाट खोल्नु भएन । अरुको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभाव पर्ने गरी लेख्नु हुँदैन । आफूलाई मन लागेको कुरा लेख्न पाइन्छ तर अरुको आत्म-सम्मानमा ठेस पुर्‍याउनु हुँदैन ।
के ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ ?
आचारसंहिता जरुरी छ तर त्यही अनुसार चल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने साइबर कानुन छ तर त्यसको पुर्ण रुपमा पालना हुन सकेको छैन । आचारसंहिता बन्यो, कसैले यसको अनुशरण गर्लान् । तर दीर्घकालिन रुपमा यसको पालना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जबसम्म व्यक्तिगत रुपमा नै मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने महशुस हुँदैन त्यतिबेला सम्म अचारसंहिता कागजमा मात्रै सिमित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
ब्लग बाहेक अर्को सोसिअल नेट्वर्किङ साइट ट्वीटरमा कत्तिको सक्रिय हुनुहुन्छ ?
ट्वीटर चलाएको त धेरै अगाडी नै हो । तर त्यो बेलामा मलाई ट्वीटर चलाउन आँउदैन थियो । धेरै साथी पनि थिएन, भएको जति पनि आ-आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । विगत पाँच-छ महिना देखि निकै सक्रिय भएर चलाउन थालेको छु ।
ट्वीटरमा किन आइ फुच्ची ह्यान्डल राख्नु भएको हो ?
मलाई फुच्ची भन्ने नाम एकदमै मन पर्छ । मैले काम गर्न थालेको करिब छ वर्ष
भइसकेको छ । मैले काम गर्न थल्दा कुनै पनि संस्थामा म नै सानो हुन्थेँ । मेरा साथी र सिनियरले मलाई फुच्ची भन्नुहुन्थ्यो । मसँग मिल्ने मान्छेहरुले मलाई अहिले पनि त्यही नामले बोलाउँछन । त्यही भएर फुच्ची नै राखेको हुँ । पहिला फेसबुकमा पनि स्मृति फुच्ची नै राखेको थिएँ तर पछि पूरा नाम नै राखेँ ।
ब्लग र ट्वीटरमा के फरक छ ?
ट्वीटरमा छिटो रेस्पोन्स पाइन्छ । जस्तो मैले बन्दको बारेमा केही लेखेँ भने तुरुन्तै रेस्पोन्स आइहाल्छ । यदी मैले कसैको बारेमा चित्त नबुझेको कुरा लेखेँ भने त्यसमा राम्रो-नराम्रो छिटो रेस्पोन्स आइहाल्छ । मैले ब्लगमा केही कुराको बारेमा लेखेँ भने ट्वीटरमा त्यसको संक्षेपमा लेख्छु ।
मैले लेखेको ब्लगको लिंक ट्वीटरमा राखिदिन्छु । ट्वीटरमा लिंक देखेर ब्लग पढेर प्रतिकिया दिने गर्नुहुन्छ । मैले ट्वीटरमा परिचय दिँदा आफ्नो ब्लग लिंक पनि राखेको छु जसले गर्दा यसको ब्लग पनि रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ र खोलेर हेर्ने गर्नु हुन्छ ।
अरु सामाजिक सञ्जाल के-के चलाउनु हुन्छ ?
फेसबुक चलाँउछु । फेसबुक जस्तै नेपाली साइट ‘हाम्रो बुक डट कम’ पनि चलाउछुँ ।
कतिको समय दिनु हुन्छ ?
निरन्तर चलाईरहेको हुन्छु । गाडीमा कतै गइरहेको बेलामा चलाउँछु । फेसबुक त विशेष गरी फोटो राख्न र हेर्नको लागि चलाउँछु । साथै च्याट गर्न , कमेन्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्छु ।
मेरोरिपोर्ट कतिको हेर्नु हुन्छ ?
पहिला मलाई मेरोरिपोर्टको बारेमा थाहा थिएन । जनकराज भट्ट साताको ब्लगर हुनु भएको थियो । उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्ताको लिंक ट्वीटरमा शेयर गर्नु भएको थियो । त्यसपछि मैले मेरोरिपोर्टको बारेमा थाहा पाएँ । अहिले म निरन्तर रुपमा मेरोरिपोर्ट हेर्ने गर्छु ।
मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ ?
राम्रो लाग्छ । अहिले अनलाईन पत्रकारिता टिक्न गार्‍हो छ । ठूला-ठूला मिडिया हाउसको मात्र अनलाईन न्युज साइट छ । सानो मिडिया हाउसको भए पनि अपडेट नै हुँदैन । तर मेरोरिपोर्टको निरन्तर रुपमा अपडेट भइरहेको हुन्छ ।
मेरोरिपोर्टका लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरोरिपोर्टले राम्रो काम गरिरहेको छ । तर अझै पनि मेरोरिपोर्टको बारेमा एउटा समूहलाई मात्र थाहा छ । बाहिर मानिसहरुलाई यसबारे राम्ररी थाहा छैन । यसकोलागि मेरोरिपोर्टले कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउने वा आफैंले कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेमा अझ धेरै मानिसहरुसम्म पुग्न सक्छ होला।
स्मृतिको ब्लग लिङ्क: http://smritikozindagi.blogspot.com/
Comment by Santosh Devkota on May 25, 2012 at 2:25pm
Comment by Pagal Basti on May 24, 2012 at 2:13pm
लौ बधाइ छ है हजुर हाम्रा तर्फबाट पनि
Comment by एसवी गौतम on May 23, 2012 at 6:24pm
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on May 23, 2012 at 5:39pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on May 23, 2012 at 4:44pm
बधाइ छ स्मृति । अझै धेरै पढ्न पाइयोस् र फोटोहरु पनि हेर्न पाइयोस् ।
Comment by Amuna Chapagain on May 23, 2012 at 4:26pm
Comment by Kranti Darai on May 23, 2012 at 4:20pm
Congratulations Smriti .. :)
Comment by sabinsingh on May 23, 2012 at 4:18pm
बधाइ छ स्मृतिलाइ :)